ရှော့ခ်ရှိသောမာဆတ်များ | OnDoctor
တစ်ခုသော ညနေခင်း မောင်ဒေါက်တာတစ်ယောက်တည်း ဆေးခန်းဝယ် အေးအေးလူလူရှိနေခိုက် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထိုင်ပွတ်နေစဉ်. . .
‘ဟာ ငါ့ဆရာကတော့ ဖုန်းကို အသည်းအသန်ပွတ်နေလိုက်တာ ကြည့်စမ်း၊ လူတောင်ရှေ့ကိုကိုင်းနေပြီ။ ဘယ်နှယ့်လဲ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောတော့ ဖုန်းကို မျက်စိနဲ့တတန်းတည်းထားပြီးကြည့်ရမယ်၊ ခေါင်းငုံ့ပြီးမကြည့်ရဘူး၊ ခါးကိုမတ်မတ်ထားပြီး ထိုင်ရမယ်ဆို။ အခုတော့ ဆရာကိုယ်တိုင်ကိုယ့်စကားကိုယ်နားမထောင်ပါလားဗျ. .ဟဲဟဲ’
‘အေးဗျ ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်ဆိုတာက သူများကိုသာဆရာလုပ်တာ။ ကိုယ်တိုင်ကျ သိပ်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင်မနေဘူးရယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေပေါ့ဗျာ အဟဲ’
မောင်ဒေါက်တာလည်း ဆေးခန်းထဲဝင်လာပြီး ဆရာဝန်ကို ဆေးပြန်ကုနေသော ကိုလူနာကို ရယ်စရာအဖြစ် စကားပြန်ရင်း လျှောချလိုက်ရသည်။ ကိုလူနာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဆေးခန်းလာပြသည်လည် းမဟုတ်။ သူအားရင်အားသလို မောင်ဒေါက်တာ့ဆေးခန်းထဲလာပြီး အပျင်းပြေ ဟိုဟိုသည်သည် စကားလာပြောခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော် သူနှင့်စကားပြောရသည်မှာလည်း သတိထားရသည်။ တစ်ခါတစ်လေ အနှောင့်အသွားမလွတ်တာမျိုး ပါလာတတ်သည်။
ယခုလည်း ပြောရင်းဆိုရင်းကပင် ကိုလူနာ. . .
‘အဲဒါပြောတာပေါ့ ဆရာတို့က တစ်နေ့လုံးဆေးရုံမှာလူနာကြည့်၊ ညနေကျတော့ ဆေးခန်းမှာ လူနာကြည့်နဲ့ သည်ကြားထဲ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေကလည်းသုံးရသေးဆိုတော့ သေချာပေါက် ဇက်ကြောတတ်တာတို့၊ အညောင်းမိတာမျိုးရှိမှာပဲဗျ။ အဲသည်တော့ ဆရာ အချိန်ရရင်. . အားတဲ့ရက်လေးဘာလေး အညောင်းပြေအောင် မာဆတ်အနှိပ်ခန်း တို့ဘာတို့ သွားသင့်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ဆို ဟိဟိ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တော့ သွားတယ်’
‘အဲ အကောင်းမှတ်လို့ နားထောင်နေတာ။ ငါ့ အကိုကတော့ စဖောက်လာပြီ။ လက်စသတ်တော့ မာဆတ်သွားဖို့ ကျွန်တော့်ကို လာအဖော်စပ်နေတာကိုး’
‘အမယ် မာဆတ်ဆိုတာနဲ့ပဲ ကိုယ့်ဆရာကလည်း ကိုယ်ထင်ချင်တာထင်နေပြန်ပြီ။ ကျွန်တော်ပြောတာက မျက်မပြင်အကြောပြင်တို့၊ ခြေထောက်နှိပ်တဲ့ မာဆတ်တို့လို ကျန်းမာရေးအနှိပ်ခန်းကိုပြောတာပါဗျ။ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်မတွေးပါနဲ့ဦး’
‘သြော်အဲဒါဆိုလည်း Massage (မဆာ့ချ်) လို ပြောလေဗျာ။ ဗမာလို မာဆတ်လို့ပြောလိုက်ရင် နားထောင်ရတာ တစ်မျိုးကြီးပဲဗျ။ ကဲ ထားပါ၊ အဲသည်လို တကယ့် Massage တွေဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဗျာ။ အနှိပ်ပညာကုထုံး Massage Therapy ဆိုတာ ဆေးပညာက လက်ခံထားတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် တွေ့ရာကြုံရာ အနှိပ်သည်တိုင်းတော့ အနှိပ်မခံသင့်ဘူးလို့တော့ ထင်တယ်ဗျ။ မနှိပ်တတ်ရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်’
‘ဟုတ်ရင်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ် ဆရာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဆက်ရှင်လောက် သွားအနှိပ်ခံလိုက်ရင် တော်တော်အညောင်းညာပြေထွက်သွားတာပဲ။ နောက်နေ့ကျရင် အလုပ်ရတာ ပေါ့ပါးသွားတယ်ဗျ’
‘ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း နှိပ်တာမကောင်းဘူးလို့လည်း မပြောပါဘူး။။ သူများလုပ်ငန်းကိုလည်း တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ စနစ်တကျ လေ့လာသင်ကြားထားတဲ့ အနှိပ်ပညာသည် massage therapist တွေဖြစ်ရင်တော့ စိတ်ချရတာပေါ့ဗျ။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဆံပင်ညပ်ဆိုင်မှာ ခေါင်းလျှော်ရင်း အနှိပ်ခံလိုက်တာ လက်တစ်ဖက် အကြောသေသွားတာမျိုးတို့၊ အနှိပ်ခံရင်း ဇက်ချိုးလိုက်ရာကနေ အာရုံကြောမကြီးထိသွားပြီး လမ်းလျှောက်လို့မရတာတော့မျိုးတို့ ဖြစ်သွားတာ တွေ့ဖူးတော့ သတိထားရအောင်လို့ပါ’
‘ဟုတ်လား။ အဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်လား။ အင်း ဒါဆိုရင်တော့ သတိထားရမှာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အခု ကျွန်တော်တို့အနှိပ်ခံတာမျိုးက အရမ်းကြီးအားနဲ့နှိပ်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အပူထုတ်တာမျိုးတို့ အကြောဆွဲပေးတာမျိုးတို့၊ ဒီလောက်ပါပဲ’
‘အဲ အဲဒီအပူထုတ်တယ်ဆိုတာလည်း ကြောက်ရတယ်ဗျ။ အဲသည်နှိပ်နည်းကတော့ ရိုးရာနည်းထင်တယ်နော်။ ပေါင်တွင်းကြောကို ကြာကြာဖိထားပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တေ့ာ ရှိန်းခနဲဖြစ်သွားတာကို အပူထုတ်တာလို့ ခေါ်ကြတာမဟုတ်လား။ သူက ပေါင်တွင်းသွေးကြောမကြီးကို လက်နဲ့ဖိပြီး ပိတ်ထားသလိုလုပ်လိုက်တာဗျ။ ပိတ်ထားတော့ အဲသည်နေရာမှာ သွေးတွေက ရှေ့ကိုသိပ်မစီးတော့ဘဲ စုပြီးပုံလာတယ်လေ၊ ပြီးတော့မှ ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ ဝေါခနဲ ရှေ့ကိုအရှိန်နဲ့ပြန်စီးသွားတာ အဲဒီအချိန်မှာ ပူခနဲ ရှိန်းခနဲ ဖြစ်သွားတာကို အသုံးချတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ ပေါင်တွင်းသွေးကြောမှာ သွေးပြန်ကြောဆိုတာလည်း ရှိတယ်ဗျ။ တစ်ချို့လူတွေမှာ အပူထုတ်ရင်းနဲ့ အဲသည်သွေးပြန်ကြောမှာ ဒဏ်ရာရသွားပြီး သွေးခဲတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ အဲဒါကနေ နောက်တစ်ခေါက် ဖိပြီးလည်း ပြန်လွှတ်လိုက်ရော သွေးခဲက သူ့နေရာကနေ ပြုတ်ထွက်ပြီး အပေါ်က အဆုတ်သွေးကြောမှာ သွားပိတ်ရင် အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာတွေ ရှိတယ်ဗျ’
‘မြတ်စွာဘုရား အဲသညလိုဆိုတော့လည်း ဘယ်အနင်းအနှိပ်မှ စိတ်မချရဘူးပေါ့နော်’
‘အဲသည်လိုကြီးပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ခုနက ပြောသလို စနစ်တကျ သင်ယူလေ့လာထားတဲ့ ပညာရှင်မျိုးဆိုရင် လူခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေ နားလည်ထားတယ်ဆိုရင် စိတ်ချရပါတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတာကတော့ အကြောတတ်တယ်၊ ညောင်းညာတယ်ဆိုတိုင်းလည်း အနှိပ်ခံရုံနဲ့မပြီးဘူးဗျ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ သေချာသိမှ အနှိပ်ခံရင်သက်သာလောက်တဲ့ အခြေအနေမျိုး၊ အနှိပ်ခံလို့မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးစတာတွေ ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီးမှ အနှိပ်ခံရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ’
‘အဲဒါဆိုရင် အခုကျွန်တော် ဆက်အနှိပ်ခံသင့်သလား ဆရာ၊ ရပ်လိုက်ရမလား’
‘ကောင်းတာကတော့ အနှိပ်ခံမယ်ဆိုရင် ဘယ်နှိပ်နည်းတွေသုံးတာလဲဆိုတာ အရင်သိထားရင်ပိုကောင်းမယ်ဗျ။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ အများလက်ခံထားတဲ့နှိပ်နည်းတွေထဲမှာ အဓိကအားဖြင့် အနောက်တိုင်းနည်းနဲ့ အရှေ့တိုင်းနည်းဆိုပြီး နှစ်နည်းရှိတယ်ဗျ။ အနောက်တိုင်းနည်းကတော့ ရောဂါဗေဒတို့၊ ခန္ဓာဗေဒတို့ကိုလိုက်ပြီး လက်နဲ့ဖိတာ၊ ချေတာ၊ ပုတ်တာ စတာတွေပါတယ်။ အရှေ့တိုင်းနည်းကတော့ တရုတ်အပ်စိုက်နည်းလို အပ်အစား လက်နဲ့နှိပ်တာ၊ ပြီးတော့ ဂျပန်နှိပ်နည်းဖြစ်တဲ့ အခု reflexology ခေါ်တဲ့ ခြေထောက်နှိပ်တဲ့ပညာ စတာတွေ ပါပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီနည်းတွေကို တစ်ကယ်သိတဲ့ပညာရှင်တွေ၊ လိုင်စင်ရအနှိပ်ပညာရှင်တွေ ဆီမှာဆိုရင်တော့ စိတ်ချရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ကလည်း နှိပ်မယ် နှိပ်မယ့်နေရာဟာ အရိုးကျိုးထားတာမျိုး၊ သွေးခြေဥပြီးရောင်နေတာမျိုး၊ ရောဂါပိုးဝင်နေတာမျိုး၊ အဆစ်တွေလွဲနေတာမျိုးတွေ ရှိမရှိသိရမယ်၊ ရှိရင်တော့ အနှိပ်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး အရိုးပွနေနိုင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆိုရင်လည်း သတိထားရမယ် အားသုံးပြီးနှိပ်တာမျိုးကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်’
‘အဲဒါဆိုရင်လည်း ဆရာရယ် ကျွန်တော်သွားတဲ့ မာဆတ်ကို သေချာပြန်စုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ စိတ်မချရရင်တော့ မသွားတော့ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မာဆတ်တိုင်းစိတ်မချရဘူးပေါ့နော်။ တချို့က ရှော့ ရှိတယ်ပေါ့ ဟုတ်လားဆရာ’
‘ဟား ဟား ဟုတ်ပါတယ်။ ရှော့ရှိနိုင်မယ့် မာဆတ် အဲ Massage ကိုရှောင်ပါဗျာ…’